Mila mandroso ny raharaham-pirenena | NewsMada
Mila mandroso ny raharaham-pirenena
Na inona filaza sy fomba fijery, mila mandroso ny raharaham-pirenena. Tsy efa mby amin’izany ve izao? Eny, na eo aza ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina covid-19. Efa miroso amin’ny fanomanana fifidianana loholona, ohatra, ny Ceni, nanolotra volavolana tetiandrom-pifidianana ho amin’ny 11 desambra. Ahoana kosa ny amin’ny fifidianana kaominaly izay tokony haverina?
Ohatra iray ilazana fa mandeha sy mitohy ny raharaham-pirenena. Eo amin’ny fiainam-bahoaka na ny lafiny sosialy indray, ohatra: mizotra araka izay niheverana azy ny fanadinam-panjakana. Miara-dalana amin’izany ny fanomamana sy fikarakarana ny taom-pianarana manaraka. Tsy latsak’izany ny fiverenan’ny fiainam-bahoaka andavanandro miandalana, na eo aza ny fahasahiranana efa ho lava.
Na ahoana na ahoana, tsy maintsy atrehina ny raharaham-pirenena ary mila miatrika ny fiainany isan’andro ny vahoaka. Tsy mandrimandry manan-draharaha. Mandeha ny fotoana. Izay tsy mandroso, mihemotra. Mafimafy sy sarotsarotra no ho ny teo aloha ny aorian’ny krizy ara-pahasalamana. Tsy eto Madagasikara ihany fa maneran-tany. Izay lasa aloha no enjehina? Na izay mandeha no sakanana…
Na inona na inona atao, tsy ilaozan’izay mitsikera, mamendrofendra, manaratsy, misompatra na manapotika aza. Eny, na izay vao tetikasa aza, tsy avelan’ny sasany hahita masoandro. Tsy misy an’izay ve, ohatra, ny amin’ny fahitana sy fampiasana ny fanefitra sy fitsaboana ny valanaretina covid-19? Tsy eto an-toerana ihany, fa ny avy any ivelany indrindra koa. Vao mainka ny amin’ny asa fampandrosoana?
Mby amin’ny hoe: aleo enjehina na misy manenjika ihany ny tena; amin’izay, lasa lavitra. Ny sakana no vao mainka anaovana dingan-dava. Amin’izao aorian’ny krizy ara-pahasalamana izao, misy ny miandry kendry tohina fotsiny amin’ny hoe sasatry ny miarina? Izay no tsy maintsy ijoroana sy irosoana amin’ny asa fampandrosoana, araka izay tandrify ny tsirairay: mila tohizina na tsy mora sy tsy ho vetivety aza.